३ प्रदेशका ३ सय ६४ स्थानमा आज उम्मेद्धारी, १५ हजार उम्मेद्धार चुनावी मैदानमा – YesKathmandu.com
आइतबार ०४, असार २०७४
काठमाडौं । स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत आज तीन प्रदेशको ३ सय ३४ स्थानमा उम्मेद्धारी दर्ता हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले विहान ८ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म उम्मेद्धारी दर्ताको समय निर्धारण गरेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश नम्वर ३, ४ र ६ नम्वर प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने आज प्रदेश नम्वर १, ५ र ७ नम्वर प्रदेशमा मनोनयन हुन लागेको हो ।
दोस्रो चरण अन्तर्गत आज एक महानगरपालिका ७ उपमहानगरपालिका, १ सय ११ नगरपालिका २ सय १५ गाउँपालिकामा उम्मेद्धारी दर्ता हुन लागेको छ । कतिपय स्थानमा दलहरुबीच चुनावी तालमेल समेत भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकामा एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकबीच तालमेल भएको छ भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको छ । त्यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको छ भने एमाले एक्लै मैदानमा उत्रेको छ ।
दोस्रो चरणमा ६४ लाख ३२ हजार ७ सय ३५ मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन् । ३ सय ३४ स्थानमा हुने स्थानीय तहमा १५ हजार ३८ प्रतिनिधिले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ८ हजार ३ सय ६४ मतदान केन्द्र रहेका छन् भने ६६ हजार ९ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् ।
निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको २ नम्वर प्रदेशमा सरकारले २ असोजका लागि निर्वाचन सारेको छ । तर सरकारले जुन उदेश्यका साथ निर्वाचन सारेको थियो, त्यो भने पुरा हुन सकेन । आन्दोलनमा रहेको राष्टिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागि गराउने उदेश्य राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश नम्वर २ को निर्वाचन सारेका थिए ।
यो वर्षको आर्थिक बृद्धि ४.९ प्रतिशत – एडीबी
प्रधानमन्त्री ओलीले भने–हेल्लो मनिषा जी
कांग्रेसको बैधानिकता जोगाउन संविधानमा संशोधन प्रस्ताव
चार दिनमा गणना भयो जम्मा ९०३ मत, डा. शेखर कोइरालाको अग्रता
मध्यराति किन सन्किए लोकमान ?
७१ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक, हेर्नुहोस कसकसे कहाँकहाँ जिते ?
तिलाठी अतिक्रमणका नेपाली प्रतिवादी भारतीय प्रहरीको नियन्त्रणमा
नवराज सिलवालविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता,सिलवालले पेस गरेको कागजातमाथि छानविन हुने
सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा १६ वर्षयता कै सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला
मेयरका उम्मेदवारको यो कस्तो हरकत ? जग्गाधनी पुर्जामा माओवादी चुनाव चिन्हको छाप !